﻿ आत्महत्या भयावह भएको होईन, जोखिम बढेको मात्र हो ।
कोरोनाको संकट र लकडाउन पछि आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्यो ! आत्महत्याको अवस्था भयावह हुँदै भन्ने जस्ता समचार हिजो आज आउन थालेका छन् ।
यस घटनालाई कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकटसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिएको छ । लकडाउन सुरु भए देखि ७५ दिनसमम्म अवधिमा नेपालमा एक हजार २ सय २७ जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउछ । जुन दैनिक सरदर १६ जना पर्न आउँछ ।
नेपालमा पनि आत्महत्या पहिला देखि नै जनस्वास्थ्यको एउटा ठुलो समस्या र चुनौतिका रूपमा देखा पर्दै आएकोछ । नेपालमा आत्महत्या गर्नेको दर प्रत्येक वर्ष ८/१० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५,७५४ जना नेपालीले आत्महत्याबाट ज्यान गुमाएका थिए । यसरी हेर्दा नेपालमा प्रत्येक दिन सरदर १६ जना व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने गरेको सरकारी आँकडाले देखाउँछ।
प्रकृतिक विपत्ति पर्दा, रोग ब्याधि फैलिदा जस्ता असहज र जोखिमपूर्ण अवस्थामा मानसिक रोग तथा आत्महत्याको दर बढेर जाने जोखिम भने हुन्छ ।
त्यसैले आत्महत्या लकडाउन पछिको मात्र समस्या हो । लकडाउन पछि भयावह भएको छ , पहिले यस्तो थिएन भन्ने बुझाई सरासर गलत हो । लकडाउन भन्दा पहिले र लकडाउन पछिको तुलना गर्ने हो भने खासै फरक देखिदैन । तर बढदै जाने संकेतहरु भने देखा पर्न थालेकाछन् ।
बालबालिकामा भने यो बिचमा आत्महत्या गर्ने दर बढेर गएको देखिन्छ । जुन दुखद हो । आत्महत्या एकदमै संवेदनशिल विषय हो ।
आत्महत्याको समचारलाई अतिरन्जित र सनसनी पुर्ण बनाउनु हुँदैन । यसले समाजमा झनै नकारात्मक असर पुर्‍याउँछ। डिप्रेसनमा रहेका र आत्महत्याको सोच बनाएकाहरुमा आत्महत्या गर्ने आँट बढ्छ । बालबालिकाहरुले त्यसको सिको गर्न सक्छन् ।
आत्महत्या नेपालको मात्र समस्या पनि होइन । यो विश्वकै साझा समस्या हो । विश्वमा प्रत्येक ४० सेकेण्डमा एक जनाले आत्माहत्या गर्छ भने प्रत्येक ३ सेकेण्डमा १ जनाले आत्महत्याको प्रयास गर्ने गर्दछ । एक आत्महत्या हुँदा पच्चिस व्यक्तिले आत्महत्याको प्रयास गरिसकेका हुन्छन् र धेरै व्यक्तिहरूले आत्महत्या गर्न गम्भिर रूपमा सोचेका हुन्छन् ।
प्रत्येक वर्ष विश्वमा सरदर ८÷१० लाख व्यक्तिले आत्महत्याबाट आफ्नो ज्यान गुमाउने गरेका छन् । यो संख्या युद्ध, दैवी प्रकोप, सडक दुर्घटना, महामारी लगायतका कारणहरूबाट हुने मृत्यु भन्दा धेरै हो । विश्वमा महिलाको तुलनामा पुरुषहरुले बढि आत्माहत्या गर्ने गर्छन । तर आत्महत्याको प्रयास भने पुरुषमा भन्दा महिलामा बढि देखिन्छ ।
प्रायः सबै मानिस दीर्घजीवन चाहन्छन् । मर्नदेखि सबैलाई डर लाग्छ । “मर्ने कसैको रहर हुँदैन” तर किन कोहि व्यक्ति आत्महत्या गरेर आफ्नो जिवन आफै समाप्त पार्न खोज्छन ?
आत्महत्याको अवस्थामा पुगेको बेला पक्कै पनि व्यक्तिले आफ्नो जीवनका सबै ढोकाहरू बन्द भएको देख्छ होला । मर्नु बाहेक अरु कुनै पनि विकल्पहरू भेट्दैन होला । उ चरम निरासामा डुबेको हुनसक्छ ।
जसरी कुनै कुनै शारीरिक रोगमा केही व्यक्तिहरु उच्च जोखिमा हुन्छ । त्यसै गरि केही व्यक्तिहरु मानसिक रोग र आत्महत्याको हिसाबले केहि उच्च जोखिममा हुन सक्छन् ।
मानसिक रोग जोसुकैलाई लाग्न सक्दछ । मानसिक रोग र आत्महत्यालाई हाम्रो समाजले फरक रुपमा लिन्छ । फरक तरिकाले बुझ्छ । मानसिक रोगलाई पूर्व जन्मको पाप र अपराध ठान्छ । देवी देवता कुल देवता बिग्रेको भन्छ ।
आत्महत्या गर्नेलाई समाजले पानी मरुवा, लाछीको उपमा दिन्छ । आत्महत्या गर्नेको अनुहार हेरियो भने अगति परिन्छ भनेर अनुहार लुकाउँदै र नाक खुम्चाउँदै हिँड्नेहरू पनि हाम्रो समाजमा भेटिन्छन् । आत्महत्या गर्नेको परिवारमा अरु व्यक्तिहरूको आउजाउ कम हुने तथा पानी बाराबारसम्म गरेको पाइन्छ । मानसिक रोग तथा आत्महत्याप्रतिको गलत बुझाई धारणा र सोचमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ ।
यहाँहरुमा पनि कुनै किसिमको मानसिक समस्या, आत्महत्याको सोच वा प्रयास जस्ता समस्या भएमा सहयोगका लागि निर्धक्क फोन मार्फत मनोपरामर्श सेवा लिन सक्नु हुनेछ । जसका लागि फोन नः ९८१३५२७७३२ चौबीसै घण्टा खुला रहनेछ ।